हाम्रो बारेमा - शेन्ज़ेन हर्बिन आइस सिस्टम कं, लिमिटेड
शेन्जेन हर्बिन आइस सिस्टम कं, लिमिटेड २०० 2006 मा फेला पर्‍यो। यसले फ्ल्याक आईस मेशीन, ट्यूब आइस मेशीन, ब्लक आइस मशीन लगायतका सहित आइस मसिन टेक्नोलोजी सुधार गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।
हामी फ्लेक हिउँ इभ्यापरेटरहरू, फ्लेक आईस मेशिनहरू, ट्यूब आइस मेशिनहरू, ब्लक आइस मेशिनहरूको लागि OEM / ODM को साथ ठूलो कामहरू गर्दैछौं। हाम्रो उत्पादनहरु विश्व भर मा हाम्रो व्यापार साझेदारहरु द्वारा न्यानो स्वागत छ।
फ्लेक आईस मेशिन टेक्नोलोजी:
हामी चीनमा फ्ल्याक हिउँ इभ्यापरेटरहरू निर्माण गर्दछौं र हामी अन्य धेरै चिनियाँ आइस मेशीन कम्पनीहरूलाई फ्ल्याक आईस इभ्यापरेटरहरू बेच्छौं, जसले हर्बिन बाष्पीकरणकर्ताहरूलाई उनीहरूको कूलि units इकाइहरूसँग जोड्दछन् र स्थानीय रूपमा विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा टर्नकी फ्लेक आइस मेशिनहरू बनाउन।
Chinese०% भन्दा बढी चिनियाँ फ्लेक आइस मेशिनहरू हर्बिन फ्लेक हिउँ इभ्यापरेटरसँग सुसज्जित छन्।
हर्बिन फ्लेक हिउँ इभ्यापरेटरहरू पहिले नै विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइसकेको छ।
यसैबीच, हर्बिन कम्पनीले फ्ल्याक हिउँ इभ्यापोरेटरको तापीय चालकता सुधार गर्न २०० since देखि इन्टिएपरेटर बनाउन क्रोमड सिल्वर अल्यु प्रयोग गर्न थाल्यो। यस प्रकारको चाँदी मिश्र एउटा विशेष सामग्री हो, हर्बिन आइस सिस्टमले पेटन्ट गरेको छ। नयाँ सामग्रीले अन्य चिनियाँ फ्लेक हिउँ मशीनहरूको तुलनामा थर्मल चालकता 40०% ले सुधार गर्‍यो, र यसले लामो समयको प्रयोग पछि विकृतिलाई रोक्दछ।
ट्यूब आइस मेशिन टेक्नोलोजी:
हर्बिन आइस प्रणालीले २०० since देखि भोग ट्यूब आइस मेशीनबाट अनुभव सिक्न शुरू गरे।
हामीले जुलाई २०, २०० in मा जिओबाang आइस प्लान्ट (शेन्जेनमा सबैभन्दा ठूलो आइस प्लान्ट) बाट P34AL खरीद गरेका थियौं। हामीले ट्यूबको बरफ मेसिनलाई पृथक गरे, र प्रत्येक एकल कम्पोनेन्टहरू प्रतिलिपि गरे, जस्तै पानी प्रवाह निर्देशक, वाष्पीकरणमा तरल स्तर सेन्सर, कम्प्रेसर तेल परिसंचरण प्रणाली, स्मार्ट लिक्विड आपूर्ति प्रणाली, स्थिर दबाव वाल्भ, दक्ष डीफ्रोस्टिंग प्रणाली र सबै कुरा।
Vogt अनुभवको आधारमा, हामीले २०१० मा परीक्षण गर्न र आफ्नै ट्यूब आइस मेशीन सुधार गर्न शुरू गर्यौं।
२०११ मा हामी चीनमा सब भन्दा राम्रो ट्यूब आइस मशिन निर्माता बन्छौं।
उच्च प्रविधि, उच्च गुणस्तर र राम्रो मूल्यले हर्बिन कम्पनीलाई ट्यूब आइस मशीन बजारमा धेरै छिटो हुर्कन बनाउँछ।
ब्लक आइस मेशिन टेक्नोलोजी:
२०० Before अघि, हामी परम्परागत ब्राइन पूल ब्लक आइस मशीनमा फोकस गर्छौं।
हामीले २०१० देखि प्रत्यक्ष रेफ्रिजरेसन ब्लक आइस मेशीन उत्पादन गर्न थालिसकेका छौं।
यो नयाँ टेक्नोलोजी ब्लक आइस मेसिन शक्ति बचत, स्थिर छ।
यस बीच, हामी राम्रो आइस प्याकिंग मेसिन, बरफ कोठा, चिसो कोठा, पानी चिलीरहरू, शुद्ध पानी प्रणाली, झोला सीलरहरू, हिउँ बनाउने मेशिन, भ्याकुम चिल्लर र यस्तै अन्य आपूर्ति गर्दछौं, र हामी यसको लागि धेरै राम्रो छौं।
(१) हरबिनको मुख्य मूल्य: ग्राहकहरूको लागि मूल्य सिर्जना गर्नुहोस् र समाजको लागि फाइदाहरू सिर्जना गर्नुहोस्!
(२) हर्बिन "क्वालिटी पहिले, प्रतिष्ठा पहिलो, सेवा पहिले" भन्ने व्यवसाय दर्शनको पालना गर्दछ, आविष्कार गर्ने उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई सुधार गर्न नयाँ विकास र विकास गर्न जारी रहनेछ, र विश्व स्तरीय बरफ बनाउने ब्रान्ड बन्ने छ। ।
सबै बरफ मेसिनहरू विशेष रूपमा एकदम कडा हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो, ताकि तिनीहरू हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट ग्राहकको सुविधामा डेलिभरीको क्रममा राम्रोसँग बाँच्न सक्दछन्। कुनै पाइप ब्रेकिंग छैन, वेल्डिंग क्षेत्रहरूमा कुनै क्र्याक छैन, कम्पुने अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री ढुवानी र सडक यातायात पछि ढीला भागहरू छैन।
सबै बरफ मेसिनहरू ग्राहकहरूलाई डेलिभर गर्नु अघि hour२ घण्टा परीक्षण बितेर जान्छ।
हर्बिनले सबै बरफ मेसिनहरूको लागि २ months महिनाको वारेन्टी प्रदान गर्दछ।
आइस मेशिनहरू स्थापना गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन हामीसँग व्यावसायिक बिक्री सेवा सेवा टीम पनि छ। अन-लाइन परामर्श सेवा लिफ्ट लामो समयको लागि निःशुल्क हो।
हर्बिन आइस सिस्टममा मानिसहरू:
(१) हर्बिन कम्पनीका संस्थापक, र उनले कम्पनीको नामको लागि आफ्नो नाम प्रयोग गरे। हर्बिन अब कम्पनीको सामान्य प्रबन्धक हो र निर्माणको बारेमा कम्पनीको मुख्य काम तैनात गर्दछ।
(२) माइक ली बिक्री निर्देशक हुन्, कम्पनीको दुबै चिनियाँ र विदेशी बजारको बिक्रीको प्रभारी। माइकसँग १० बर्ष भन्दा बढी समयसम्म बरफ मेसिन उद्योगमा बिक्रीको अनुभव छ, यस अघि उनले झान्जियांग महासागर विश्वविद्यालयमा एचएवीसी मेजरको स्नातक डिग्री प्राप्त गरे।
Zhangjiang महासागर विश्वविद्यालय चीन को दक्षिण मा यसको HAVC मेजर को लागी प्रसिद्ध छ।
हर्बिन आइस मेशिनहरूको प्रमाणीकरण।
सबै हर्बिन बरफ मेसिनहरूको सीई, एसजीएस, उलको प्रमाणपत्र छ।
हर्बिनको आइस मेशिनमा 70० भन्दा बढी पेटेन्टहरू छन्, जस्तै फ्ल्याक आईस इभ्यापोरेटरको नयाँ सामग्रीको लागि पेटेन्ट, फ्लड फ्लेक आईस मेशीन, ट्यूब आइस मेशिन र यस्तै।
(१) हरबिनको विभागहरूमा: विकास विभाग, खरीद विभाग, उत्पादन विभाग, गुणस्तर विभाग, व्यवसाय विभाग, र बिक्री पछि सेवा विभाग
(२) विकास विभाग: बरफ मेसिनको गुणस्तर सुधार, आइस टेक्नोलोजी सुधार, पावर बचत सुधार र यस्तै अन्यका लागि जिम्मेवार;
खरीद विभाग: आइस मेशिनका लागि सम्बन्धित सामान र सामानहरूको खरीद, जस्तै कम्प्रेसर, दबाब जहाज, विस्तार वाल्भ, कन्डेनसर, र यस्तै।
निर्माण विभाग: बरफ मेसिन र सम्बन्धित उपकरणहरूको उत्पादनको लागि जिम्मेवार।
गुणस्तर विभाग: बरफ मेसिनहरुको गुणस्तर जाँच गर्नुहोस्। र प्रत्येक मेसिनको बिजुली खपत निगरानी गर्नुहोस्।
व्यापार विभाग: ग्राहकहरु लाई योग्य आइस मेशीन उपकरण बेच्नुहोस्
बिक्री पछि सेवा विभाग: स्थापनाको लागि जिम्मेवार, खरीद गरिएको बरफ मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, र हिउँ बनाउने मेसिनहरूको सम्बन्धमा सबै मामिलाहरूको लागि अन-लाइन सेवा।
कम्पनीको उत्पादन क्षमताको परिचय
उपकरण र टेक्नोलोजीको परिचय
हर्बिन कम्पनीको आफ्नै horiz तेर्सो सानो लेथस, २ ठाडो ठूला लेथस, एउटा पूर्ण स्वचालित वेल्डिंग मेशिन, १ manual म्यानुअल वेल्डिंग मेशिन, plate प्लेट काट्ने र झुकाउने मेशीन, एक एसिड-वाशिंग सुविधा, एक निकेल र क्रोम प्लेटि pool पूल, एक हीट ट्रीटमेन्ट टनेल, एक छ। polyurethane (PU) भरिने मेसिन .........
ल्याथस र अनुभवी कामदारहरूले उत्तम गोलोपनको साथ फ्लेक हिउँ इभ्यापरेटरहरू ग्यारेन्टी गर्छन्।
व्यावसायिक गर्मी उपचार ग्यारेन्टी flake बरफ वाष्पीकरण लामो समय उपयोग पछि कुनै विकृति छ। उत्तम एसिड धुने र निकेल र क्रोम प्लेटि theले वाष्पीकरणकर्ताहरूलाई २० बर्ष भन्दा बढी समयसम्म काम गर्न अनुमति दिन्छ।
हामीसँग -० भन्दा बढी व्यक्तिहरू माथि उल्लिखित उपकरणहरूसँग व्यवसायमा काम गरिरहेका छन्, र हामी दैनिक fla-20० सेट फ्ल्याक हिउँ इभ्यापरेटरहरू गर्न सक्छौं।
हामीसँग दुई क्षमता ईन्जिनियरहरू छोटो क्षमताको व्यावसायिक प्रयोग फ्ल्याक आईस मेशिनहरू, २ इञ्जिनियर ठूला क्षमता फ्लेक आईस मेशिनहरू, engine इन्जिनियर ट्यूब आइस मेशिन र अन्य आईस मेशिनहरू उच्च टेक्नोलोजीहरूसहित।
औसतमा, प्रत्येक हप्ता, हामी साना क्षमताको व्यावसायिक सेट फ्ल्याक आईस मेशिनहरूको २०० सेटहरू पठाउनेछौं। T-१० दिन फ्लेक आइस मेशिनका सेटहरू T दिन / दिन भन्दा ठूलो हुन्छ। T- / दिन ट्युब आइस मेशिनको sets- sets सेट।
हर्बिनले कम्पोनेन्ट आपूर्तिकर्ताहरूसँग कडा सम्बन्ध कायम गरेका छन, जस्तै बिट्टार, फ्रास्कोल्ड, रेफकम्प, डानफोस, कोपल्याण्ड, इमर्सन, ओ एन्ड एफ, ईडेन, र अन्य।
हर्बिन बरफ मेसिनहरू विश्वभरि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
उदाहरण को लागी, मेड-इन-टर्की फ्लेक आइस मेशिनको 95%% स्थानीय Sogutma कम्पनीहरु द्वारा हर्बिन फ्लेक आइस वाष्पीकरणकर्ताहरु संग सुसज्जित छ।
% 65% मेड इन-चाइना फ्लेक आइस मेशिनहरू हर्बिन फ्लेक हिम वाष्पीकरणको साथ सुसज्जित छन्।
पूर्वी एशियामा technology०% उच्च टेक्नोलोजी ट्यूब आइस मेशिनहरू हर्बिन आइस सिस्टमबाट हुन्, जस्तै फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस .....
ती देशहरूमा दैनिक जीवनमा आइस ट्यूबहरू खानाको रूपमा खपत हुन्छन्।
Chinese०% चिनियाँ माछा मार्ने डु boats्गा हर्बिन समुद्री जल फ्लेक हिउँ मशीनहरु संग सुसज्जित छन्।
हर्बिन क्यारफोर, वाल-मार्ट, टेस्को, जियाजियु, र अन्य चेन सुपरमार्केटको लागि सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य फ्लेक आइस मशिन आपूर्तिकर्ता हो। आइस फ्लेक्स समुद्री खाना, माछा बिक्री, र अन्यमा बेच्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
हर्बिनको ठूलो फ्लेक आइस मेशीन र ट्यूब आइस मेशिनहरू व्यापक रूपमा सान्क्वान फूड्स, शाइनवे ग्रुप, र अन्य खाद्य प्रशोधन संयन्त्रहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
हर्बिन कम्पनीको मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, पूर्व ईयू, उत्तरी ईयू र यस्तै अन्य प्रतिनिधि र कार्यालयहरू छन्।
१. उत्पादन प्रदर्शन
उत्पादनहरू नयाँ उत्पादनहरू, विशेष उत्पादनहरू र सामान्य उत्पादनहरूमा विभाजित हुन्छन्।
(१) भर्खरका उत्पादनहरू: हाम्रा भर्खरका उत्पादनहरू पावर सेभ फ्लेक आइस मेशिनहरू हुन्। फ्लेक हिम वाष्पीकरणकर्ता बनाउन नयाँ सामग्री प्रयोग गरेर, हाम्रो फ्ल्याक आइस मेशिनले प्रत्येक १ टन बरफ फ्ल्याक्स (C० सी एम्बियन्ट र २० सी इनलेट पानीमा आधारित) बनाउन 75 75 केडब्ल्यूएच मात्र बिजुली खपत गर्दछ। अन्य चिनियाँ फ्लेक आइस मेशिनहरूले कम्तिमा १K टन हिउँ फ्लेक्स बनाउनको लागि १०० केडब्ल्यूएच बिजुली खपत गर्दछ।
हामीसँग बिक्री प्रकारका फ्ल्याक आईस मेशिनहरू पनि छन्, र ती औसत हिसाबले १ टन बनाउनेको लागि K 65 केडब्ल्यूएच बिजुली खान्छन्।
(२) विशेष उत्पादनहरू: हामीसँग २०२० मा T टी / दिन ट्यूब आइस मेशिनको लागि विशेष मूल्य छ। र हामीसँग सधैँ यस मोडेलको भण्डार छ। हामी जहिले T टी / दिन ट्यूब आइस मेशीन बेच्न सक्दछौं संसारमा सब भन्दा राम्रो मूल्य संग, र तिनीहरू स्टक मा छन्। हामीलाई ० देखि नयाँ T टी / दिन ट्यूब आइस मेशीन बनाउनको लागि १ need दिन मात्र चाहिन्छ।
()) सामान्य उत्पादनहरू: सामान्य व्यवसायिक फ्ल्याक आईस मेशिनहरू साना क्षमता हुन्, र हामी ठूला मात्रामा सानो फ्लेक आईस मेशिनहरू राख्छौं। तिनीहरू स्थिर छन् र धेरै लामो सेवा समय छ, तिनीहरू दैनिक तातो कुकुर जस्तै बेचिन्छ।
२. उत्पादको सामान्य विवरण
ब्यापारिक प्रयोग साना क्षमता फ्लेक आइस मेशिनहरू व्यापक रूपमा सुपरमार्केट, रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गरिन्छ भोजन ताजा राख्नका लागि।
ठूला फ्लेक आईस मेशिन / ट्यूब आइस मेशिनहरू सामान्य रूपमा फूड प्रोसेसिंग प्लान्टमा प्रयोग हुन्छन्। र बरफ मीटिंग प्रोसेसिंगको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा खानामा थपिन्छ।
ठूलो फ्लेक आइस मेशिन र ट्यूब आइस मेशिनहरू पनि आइस बिक्री व्यवसायको लागि हुन्। बरफको बोटले फ्लेक आइस माछा मार्ने व्यक्तिलाई बेच्छ, वा झोलामा राखिएको बरफको ट्यूबहरू कफी / बारहरू / होटेलहरू / कोल्ड ड्रिंक पसलहरू / स्टोरहरूमा बेच्दछ।
हाम्रो बरफ मेसिनहरू ठूला सुपरमार्केट, मांस प्रसंस्करण, एक्वाटिक फूड प्रसंस्करण, चरा बस्तु, छाला उद्योग, रसायनिक उद्योग, माइनमा तापमान घटाउने, जैव-फार्मेसी, प्रयोगशालाहरू, चिकित्सा सुविधा, सागर माछा मार्ने, क concrete्क्रीट निर्माण परियोजनाहरू लगायतका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ।
सबैभन्दा नयाँ टेक्नोलोजीको साथ, हाम्रो फ्ल्याक आईस मेसिनहरू अन्य चिनियाँ फ्लेक आइस मेशिनहरू भन्दा %०% बढी उर्जा बचत हुन्छ। यदि प्रयोगकर्ताले मेरो २० टी / दिन फ्लेक आइस मेशिन छान्छ भने उसले २० वर्षमा in०००० अमेरिकी डलर कम खर्च गर्नेछ। यदि उसले अन्य चिनियाँ फ्लेक आइस मेशीन छान्छ भने उसले बिजुली बिलका लागि 600००,००० बढी खर्च गर्दछ र उसले केहि पनि पाउँदैन। उहि बरफको गुणस्तर, र उही मात्रामा बरफ फ्लेक्स।
हाम्रो ट्यूब बरफ मेसिनहरू Vogt ट्यूब आइस सिस्टममा आधारित छ। तिनीहरूसँग इभ्यापोरेटर, स्मार्ट लिक्विड आपूर्ति, चिल्लो तेल सर्कुलेशन, दक्ष डिफ्रोस्टि system प्रणाली, र कुनै लिक्विड रेफ्रिजेन्ट कम्प्रेसरमा फिर्ता आउँदैन मा उत्तम तरल स्तर नियन्त्रण छ।
ती सबै विस्तृत कामहरू राम्रोसँग सकिएका छन् र तपाईंसँग हर्बिन आइस सिस्टमबाट सबै भन्दा राम्रो ट्यूब आइस मेशिनहरू छन्।
हामीसँग चिनियाँ मानक, ईयू मानक, युएसए मानक .....
इयु र युएसए मानकका साथ आइस मेशिनहरूको लागि, तार रंगहरू सीई नियमहरू पालना गर्नै पर्दछ, तरल रिसीभर सुरक्षा भल्भले सुसज्जित छ र भल्भको दुई टुप्पो छ, सबै दबाब जहाजहरूमा पीईडी प्रमाणीकरण छ .........
मेशिनको लामो सेवा समयको ग्यारेन्टी गर्न, हामी सँधै ग्राहकहरूलाई मेशिनको साथ स्पेयर पार्ट्स किन्न सुझाव दिन्छौं। पम्पहरू / मोटर्स / सेन्सरहरू / सम्पर्ककर्ताहरू / रिले धेरै राम्रो मूल्यहरूको साथ उपलब्ध छन्, यस्तै हामी हाम्रो आपूर्तिकर्ताको लागि कति तिर्ने।
हामी बरफ मेसिनहरूलाई मानक काठको बक्सहरूमा प्याक गर्दछौं, जुन fumigated प्यानलले बनेको छ। तिनीहरू विश्वका सबै देशहरूका लागि स्वीकार्य छन्।
मेशीनहरू काठको बक्सहरूमा वा कन्टेनरहरूमा राम्रोसँग कडा हुनेछन्। हामी सावधानीपूर्वक मेरो कारखानाबाट ग्राहकहरूको सुविधाको बाटोमा हल्लाउँदै, झटका लाग्दा हुने नोक्सान रोक्न सबै आवश्यक कार्यहरू गर्नेछौं।
इस्पात फ्रेमहरू प्रबलित छन् र पाइपहरू डबल कडा छन्। अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले यसलाई कहिले पनि विचारमा राखेन।
ग्राहकहरूले पहिलो पटक आइस मेशिनहरू प्राप्त गरे पछि उनीहरूले प्रेसर गेजहरू देखाउन तस्वीरहरू लिनु पर्छ। यदि मेशिनहरूसँग पाइप ब्रेकिंग, क्र्याकिंग, ग्यास रिसाउने समस्याहरू छन् भने हामी उनीहरूको नोक्सानको लागि भुक्तानी गर्नेछौं।